Tufaaxa - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 10)
Apple wuxuu baarayaa sawirada isticmaaleyaasha ee ku kaydsan iCloud sawir-gacmeedka carruurta
Sida adeegyada kale ee keydinta, Apple wuxuu si algorithmically ah u sawiraa sawirada ku kaydsan iCloud oo loogu talagalay sawirada qaawan ee carruurta.
2019 wuxuu ahaa sanadka ugufiican qeybta Adeegyada taariikhda Apple
Apple waxay xabadka ka saareysaa sanadka 2019 marka laga hadlayo Adeegyada cusub ee ay bilaabeen. Apple Arcade, Apple TV +, Apple News + iyo Apple Card iyo kuwo kale
Apple wuxuu si rasmi ah uga muuqdaa CES 2020. Ma aysan dhicin tan iyo 1992.
Apple waxay jir ahaan jirtey CES 2020. Wax aan dhicin tan iyo 1992 oo sidaas u sameysay si looga hadlo goob uu hogaamiye ka yahay: Asturnaanta
David ka dhanka ah Goliath ama waxa la mid ah: Sonos oo ka soo horjeedda Google
Sonos oo ah shirkadda ku hadasha codka ee la jaan qaada AirPlay 2 taasna waxay leedahay qaar ka mid ah ku hadlayaasha oo kaashanaya IKEA waxay ku dacweynayaan Google xadgudubka rukhsadda
Halkan waxaan ku dhaafnay dhacdo cusub oo ah #PodcastApple oo aan uga hadlayno mowduucyo kala duwan oo la xiriira Apple, CES iyo waxyaabo badan oo dheeri ah
Dami xogta goobta sawiradaada Mac
Baro sida looga saaro sumadda goobta sawirradaada marka aad ka wadaageyso Mac-gaaga, hagaajinta sirtaada iyo amnigaaga
Apple HomeKit wuxuu aad ugu joogaa CES 2020
Apple HomeKit wuxuu ka mid ahaa halyeeyada maalinta koowaad ee CES 2020. Tani waxay noqon kartaa sanadkii qaybtan shirkadda
Filimkii ugu horreeyay ee taxanaha Apple TV +: "Quest Myest: Raven's Banquet"
Apple waxay daabacdaa filimkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee taxanaha majaajillada ah ee Mythic Quest: Raven's Banquet, oo bilaabi doona hawada Febraayo 7
Apple waxay dooneysaa inay wax ku adkaato dadka wax khiyaameeya
Apple waxay dooneysaa inay hirgeliso tallaabooyin cusub oo looga hortagayo kuwa wax khiyaameeya ee ku lug leh tirooyinka taxane ah ee aaladaha.
Hadda waxaan u habeyn karnaa sanduuqa AirPodskeena ee leh emojis
Apple waxay noo ogolaaneysaa inaan shakhsiyeeyo kiiska lacag bixinta ee AirPodskeena kaliya ma ahan qoraalka laakiin sidoo kale ilaa 31 emojis kala duwan.
Tufaaxa ayaa faro madhan kaga tagaya Golden Globes
Ballanqaadka Apple ee taxanaha tayada ah laguma abaalmarin mid ka mid ah labada abaalmarin ee Golden Globes ee ay dooraneysay.
Badal furayaasha shaqada macOS Catalina
Casharkaan waxaad ku ogaan doontaa sida loo badalo loona qaabeeyo howlaha ay furayaasha shaqadu qaban karaan oo lagu daro furayaasha kale.
Tilmaamaha 7 ee aan ku siineyno hadaad heshay Mac-gaagii ugu horreeyay
Waxaan kuu keenaynaa 7 hawlood oo aan kugula talineyno inaad ku sameyso Mac-gaaga cusub.Waxay qaadan doonaan waqti yar laakiin waxaa la joogaa waqtigii maalgashiga si khibradaadu u noqoto mid qumman.
Challenge Apple Watch, Animaionic oo loogu talagalay Mac mini iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadka ugu horreeya ee sannadkan cusub ee 2020 oo waxaa ku xambaarsan warar inkasta oo ay jiraan fasaxyo iyo kuwo kale. Ha moogaan waxa ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxa ugu dhow ee (ku guuldareystay) AirPower wuxuu ka yimaadaa gacanta ZENS
Shirkadda Dutch-ka ah ee ZENS ayaa hadda suuqa ku soo bandhigtay qalab si fiican u noqon kara AirPower sharci ah oo Apple aysan suuqa ku soo qaadan karin.
Ikea waxay bilaabaysaa inay taageerto HomeKit ee indhoolayaasha Tradfri
Ikea waxay durbaba bilaabeysaa cusbooneysiinta ballanqaadka ah ee indhoolayaasha 'Tradfri' ay la jaan qaadi doonaan nidaamka 'Apple Home'
LG wuxuu ku dhawaaqay noocyo cusub oo 8k TV ah oo la jaan qaadaya AirPlay 2 iyo HomeKit
Maalmo ka hor bilowga CES 2020 ee Las Vegas, LG waxay soo bandhigtay noocyo cusub oo 8k TV ah oo ku habboon AirPlay 2 iyo HomeKit
Dhawaaqa MacBook Pro cusub ee qalab kasta oo Apple ah
Apple waxay xareysay patent-ka qalab kasta oo Apple si ay u soo saaraan dhawaqa sida uu sameeyo barnaamijka cusub ee 'MacBook Pro'.
Saamiyada Apple waxay ku dhufteen waqtigooda ugu sarreeya ee ka sarreeya dhibcaha 300
Saamiyada Apple waxay gaarayaan rikoor rikoodh ah maalmahan ugu horreeya sanadka, iyagoo gaaraya 301 dhibcood
Apple waxay lahaan doontaa adeeg bixiye labaad AirPods Pro
Sababtoo ah baahida weyn ee loo qabo AirPods Pro, Apple wuxuu bilaabay inuu haysto alaab-qeybiyaha labaad ee soo-saaridda iyo qaybinta isla
Dhacdooyinka ugu caansan Apple ee tobanka sano. 2010 ilaa 2019
Waxaan dib u eegeynaa dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee Apple tobankii sano ee la soo dhaafay ee aan ka tagnay. Waan arki doonaa haddii uu u dhigmi karo baarka go'an
Sida loo tirtiro taariikhda Siri iyo kalimaynta Mac
Waxaan ku tusineynaa sida ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee looga tirtiri karo taariikhda Apple ay ku kaydiso server-keeda ka talinteena iyo Siri
Apple waxay ugu deeqday dababkii halakeeyay Australia
Tim Cook wuxuu farriin dhiiri-gelin ah u dirayaa qof kasta oo la dagaallamaya ololka ka socda Australia wuxuuna ku dhawaaqayaa tabarucaad kooxaha gurmadka
Apple wuxuu Kordhiyay Kordhinta Adeegyada Khariidadaha Meelaha Cusub ee Mareykanka
Macluumaadka ay Apple ku bixiso adeegsiga khariidaddeeda Mareykanka waxay horeyba u bixisay faahfaahin la mid ah sidii markii lagu bilaabay San Francisco
Daahfurka AirPods, cashuurta barnaamijyada Mac iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan wajaheynaa Axada ugu dambeysa 2019 mana dooneyno inaan seegno fursad aan ku soo koobo waxyaabaha ugu muhiimsan todobaadkan
Kiisas cusub oo loogu talagalay AirPods Pro ayaa laga heli karaa Apple Store khadka tooska ah
Apple Store Online wuxuu ku daray laba kiis oo cusub oo loogu talagalay AirPods Pro, kiisas ka yimid soosaarayaasha Incase iyo Galiye
Sida loogu wareejiyo dhammaan xogtaada Mac-gaaga cusub
Haddii aad leedahay Mac cusub, sidee uga wanaagsan in lagu baro sida looga wareejiyo xogtaada kombiyuutarkaagii hore, ha noqoto Mac ama Windows
Tim Cook wuxuu qorsheynayaa inuu ka tago Apple si uu ugu biiro Jonathan Ive
Tim Cook wuxuu ka furmay xafladda shirkadda Noiche Buena wuxuuna caddeeyay inuu doonayo inuu ka tago Apple bartamaha Febraayo 2020
Miyaad ka fikireysaa inaad iibsato gacanta labaad ee AirPods?
Haddii aad ka fikirtay iibsashada gacanta labaad ee AirPods ama AirPods Pro, waa inaadan ka maqnaan Qalabkaan Nadiifinta ee uga tagi doona iyaga cusub
Xubno ka mid ah guddiga maamulka Apple ayaa markale la dacweeyay
Guddiga agaasimayaasha, halka uu kuyaal Tim Cook, ayaa helay dacwaddii afraad ee ku dhawaaqida qiyaasaha dakhliga ee aan la buuxin
Jony Ive wuxuu ku deeqay £ 100.000 si loo abuuro jardiinooyinka iskuulka
Jony Ive wuxuu muujiyaa sida ay uga go'an tahay deegaanka isagoo ugu deeqaya £ 100.000 si loo abuuro 1000 jardiinooyin iskuulada Ingiriiska
Bartaada Taabashada miyaa la qaboojiyey? Dhib malahan
Haddii Taabashadaada Taabashadu ay barafowdo wakhti kasta, ha ka welwelin maxaa yeelay xalka ayaa ka fudud sida aad u malaynayso.
Ciid wanaagsan Christmas iyo farxad 2020!
Waxaan idiin rajeyneynaa dhamaantiin inaad ku raaxeysataan Kirismaskan oo aad sannadka cusub heshaan farxad
Hackers ayaa isku dayay inuu baqdin geliyo shirkadda Apple
Wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka wax jabsada magaalada London ayaa lagu xukumay 300 oo saacadood oo shaqo ah oo lacag la’aan ah kadib markii uu isku dayay inuu si qarsoodi ah u dilo shirkada Apple sanadkii 2017
Apple Music bilaash ah, TV iyo Arcade oo loogu talagalay shaqaalaha Apple
Apple waxay shaqaalaheeda siin doontaa adeegyada Apple Music, Apple TV + iyo Apple Arcade bishaan Janaayo.
Mythic Quest ayaa xilli labaad ku yeelan doonta Apple TV +
Iyadoo aan la sugin horudhaca xilli-ciyaareedka koowaad ee Mythic Quest, Apple waxay go'aansatay inay ku habboon tahay xilli-ciyaareedka labaad in la duubo
AirPods Pro wuxuu leeyahay daahitaan ka fiican kuwii ka horreeyay
AirPods Pro ayaa sii wadaya hadalka. Waqtigan xaadirka ah iyagu waa kuwa ugu fiican ee sameecadaha sameecadaha leh ee Apple leedahay, xitaa habacsanaanta Bluetooth-ka.
Mac Pro wuxuu ku shiray Shiinaha, wuxuu ku tartamayaa Apple Watch iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan ku dhownahay inaan dhammeyno 2019-ka laakiin ma joojin doonno inaan ku darno wararka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Trick for macOS: kor ama hoos u dhig mugga iyo dhalaalka rubuc
Isku hagaajinta mugga ama dhalaalka Mac-da si aad u badan ayaa si macquul ah u suurtagal ah mahadnaqa iskudhafkan muhiimka ah
Sida loo dhigo astaanta tufaaxa adigoo adeegsanaya toobiye Mac
Waxaan ku baraynaa sida loo dhigo astaanta Apple meel kasta oo sahal ah adoo isticmaalaya toobiye kumbuyuutar Mac ah
Quest Mytic Quest: Raven's diyaafada Premieres Febraayo 7 on Apple TV +
Febraayo 7, majaajillada Mythic Quest: Raven's Banquet ayaa lagu soo bandhigi doonaa Apple TV +, majaajilo ku saabsan istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga
Apple iyo shirkado kale waxay abuuraan Gur ku xiran IP
Mashruuc cusub oo loogu magac daray Guriga Ku Xidhan IP-ga ee Apple ka qaybqaato, waxay doonayaan inay abuuraan jaangooyo otomaatiga guriga ugu habboon dhammaan
Tifatirayaasha Apple News + qaar waxay dhahaan maahan "caawimaad weyn"
Sharadka ku saabsan joornaalada ay Apple sameysay sanadkii hore ka dib markii ay iibsatay Netflix ee joornaalada, Texture, waxay umuuqataa ...
Hadda waxaad iska qori kartaa Apple Arcade sanadle ah 49,99 euro
Apple wuxuu ku darayaa rukunka sanadlaha ah ee Apple Arcade. Hada waxaad isqori kartaa sanad ah 49,99 euro
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa taxanaha Little America xilli ciyaareedkii labaad
Taxanaha Little America, oo ka soo muuqan doona bisha Janaayo 17 Apple TV +, ayaa horey loo cusbooneysiiyay xilli labaad.
Apple wuxuu ka furayaa laba Apple Stores cusub Canada iyo Japan
Markii ay u muuqatay in Apple ay ku istaagi karto bareeg iyadoo furaysa Dukaanno cusub oo Apple ah ka dib markii ay ka badneyd nus kun, wax walba waxay umuuqdaan inay tilmaamayaan ...
Xerada cusub ee Apple ee Austin ama North Carolina?
Apple weli ma aysan go'aamin in xerada cusub ay noqon doonto Austin ama North Carolina. Labada magaalo ayaa hada ah musharixiin
Ka hel digniinta batteriga hoose ee Mac-gaaga, qalabka kale ee Apple
Iyada oo barnaamijkan fudud ee la adeegsan karo iyo kan raqiiska ah, waxaan awoodi doonnaa inaan ku helno digniino batteri oo hooseeya oo ku saabsan Mac-keena, iyadoo laga helayo qalab kasta oo Apple ku xiran
Wax soosaarka Apple ee dib loo cusbooneysiiyay hadda waxaa lagu maalgelin karaa 0 kharash
Apple waxay ku dareysaa markii ugu horreysay maalgelinta eber-kharash dhan illaa 24 bilood qaybta dib-u-cusboonaysiinta ee boggeeda
Waxaan ka arki karnaa dokumentariga ku saabsan Billie Eilish Apple TV +
Dhawaan, waxaan awoodi doonaa inaan ku raaxeysano dukumiinti ku saabsan habka loo abuurayo Billie Eilish oo ka socda Apple TV +
Mac Pro, Apple oo jooga CES, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadkan waxaan ku helnay war aad muhiim u ah Apple inkasta oo ay run tahay inaysan bil muhiim ah u ahayn shirkadda. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Apple Podcasts hadda waxaa laga heli karaa Amazon Echo
In kasta oo markii hore laga heli karo Maraykanka oo keliya, haddana hadda waa suurtogal in lagu raaxaysto barnaamijyadeenna aannu ugu jecel nahay Amazon Echo
Sida wax looga beddelo hotkey-ga Mac-da ah si loo kiciyo kalimadda
Si dhakhso leh oo fudud wax uga beddel furaha toobiye si aad ugu hawlgeliso ku dhawaaqida Mac-ga
Maalgelinta 0 waxay ku kacaysaa 24 bilood shirkadda Apple Spain
Apple waxay ku darsataa maalgelin ilaa 24 bilood oo bilaa lacag ah dukaamada internetka badankoodna wadankeena horeyba waa loo heli karaa
Ilaa Diisambar 20 gaarsiinta maalinta xigta ee Apple
Apple-ka waxay ku dhawaaqaan keenista alaabooyinkooda kaydka maalinta iibka ka dib illaa iyo inta aan amarka dhigeyno ka hor 15:XNUMX galabnimo.
Apple waxaa ku jiri kara tikniyoolajiyadda holograafiyada qalabkeeda AR
Apple waxay xareysay patent-ka aaladaha dhabta ah ee la kordhiyay si ay u fududaan karaan uguna khafiifsan yihiin, taas oo ay ugu wacan tahay tikniyoolajiyadda holograafiyada
AirPods waxay garaaceen tirooyinka iibka ee abid ugu wanaagsanaa iPods
Iibinta AirPods ayaa wali ah ilo dhaqaale oo muhiim u ah shirkadda ku saleysan Cupertino.
Sida wax looga beddelo Mac wax ku qoro far waaweyn oo otomaatig ah
Beddel ama ka saar ikhtiyaarka si aad ugu darto xarfaha waawayn bilowga xukun kasta si toos ah Mac-gaaga.
11 × 16 Podcast: Soo koobid 2019, Nalalka Apple iyo Hooskiisa
Podcast-kii ugu dambeeyay ee sanadka. Toddobaadyadii la soo dhaafay, tirada wararka la xiriira labada Apple iyo tartanka, ...
Apple waxay heshaa magacaabitaankeedii ugu horreeyay ee Dahabka ah ee 'The Morning Show'
Taxanaha asliga ah ee Apple TV + The Morning Show wuxuu helay seddex magacaabis oo loogu talagalay 77th Golden Globes oo la qaban doono 5-ta Janaayo.
Kiciso feejignaan ku saabsan Mac markii laga furayo barta laga baxo
Baro sida loo kiciyo digniinta la maqli karo ee ku saabsan Mac-gaaga, si ay kuu ogeysiiso markii ay go'do oo ay ku xirnaato shabakadda korantada.
Sannadkan soo socda Apple waxay tagi doontaa CES sannado badan ka dib
Apple ayaa ka qeyb gali doonta markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1992 kana qeyb galayo barnaamijka CES ee Las Vegas. Ma aha in la soo bandhigo alaabada, in laga hadlo arrimaha gaarka ah
IDC ayaa ku qiyaastay in Apple ay soo dirtay 29,5 milyan oo la gashado rubucii hore
Dharka la gashado ee tufaaxa ayaa lagu meeleeyaa tirooyin aad u wanaagsan rubuckan dambe sida ku xusan IDC. Iibintu waa saddex jibbaar tiradii hore
Sida loo daaro ogeysiiska waqtiga ee Mac
Dhaqaaji codka Mac si ay noogu sheegto rubuc, nus saac ama saacadood. Ikhtiyaar xiiso leh oo lagu ogaanayo waqtiga wakhti kasta
Apple waxay martigelisaa guri furan oo ku yaal Apple Park
On 14-ka Diseembar, Apple waxay ku qaban doontaa guri furan Apple Park, maalin ku kooban dadka deggan aagga Cupertino.
Qeybtii ugu horreysay ee aluminium laga soo saaray kaarboon-kaarboon waxay u socotaa warshadaha Apple
Apple waxay iibsatay qaybtii ugu horaysay ee aluminium la soo saaray iyada oo aan la isticmaalin kaarboon inta ay hawshu socoto, waa dufcad loogu talagalay soo saarista alaabooyin cusub.
Ka tirtir barnaamijyada aan ku habboonayn macOS Catalina weligood
Haddii aad weli hayso codsiyo aan u dhigmin macOS Catalina, kuwa 32-bit ah, waxaan ku tusi doonaa sida looga takhaluso weligood.
Apple Pay ee basaska Madrid, Waxsoosaarka RED iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan usbuucii ku dhameysanay wararkii ugu cajiibka badnaa ee ka soo baxa Apple ee aan ka imid Mac. Maanta oo Axad ah waa maalin nasasho ee akhriso oo ku raaxeyso
Ku dar marin u helka habka mugdiga ah ee Touch Bar ee MacBook-gaaga
Waxaad ku dari kartaa ficil kasta oo dhaqso ah Barta taabashada ee MacBook Pro. Waxaan ku tusineynaa sida si deg deg ah loogu daro toggle mode mugdi
Sida loo beddelo xawaaraha jiirka ama trackpad ee macOS
Waxaan ku tusineynaa meesha aad wax ka beddeli karto xawaaraha kumbuyuutarkaaga 'Mac cursor' markaad isticmaaleyso Magic Mouse ama Magic Trackpad
BMW waxay joojin doontaa bixinta khidmadda sanadlaha ah ee ay bixiso CarPlay
Shirkadda BMW ayaa ku dhawaaqday inay joojinayso bixinta khidmadda sanadlaha ah ee ay ku bixiso CarPlay baabuurtooda oo ay ugu horreyso Ingiriiska.
Guusha kooban ee Apple News + waxay ku qasbeysaa Apple inay SPAM u dirto isticmaaleyaasheeda
Apple waxay bilowday inay si otomaatig ah u soo dirto joornaal maalinle ah oo cinwaankiisu yahay Subax wanaagsan, kaas oo muujinaya wararka ugu muhiimsan, ...
Ka taxaddar barnaamijkaaga AirPods Pro kiiskan ka yimid Catalyst
Galiye horeyba wuxuu u hayey kiisa ilaalinta sare ee loo heli karo AirPods Pro laba nooc. Qiimaha ugu badan ee € 39,99
Jilayaasha filimka "The Banker" ayaa difaacay filimka bayaan
Filimka The Banker, ayaa ah kii ugu horreeyay ee Apple ku soo galo adduunka shineemo, filim la qorsheeyay ...
Oprah inay ku soo bandhigto filim dukumiinti ah Apple TV + oo cambaareynaya xadgudubka galmada ee miyuusigga
Dokumentiga xadgudubka galmada Oprah wuxuu ka shaqeynayaa diiradda saarista warshadaha muusikada, sheegashooyinka kaladuwan
Tani waxay noqon kartaa jiilka cusub ee jiirka sixirka sida ku cad rukhsaddii ugu dambeysay ee Apple
Apple waxay diiwaangalisay patent cusub oo loogu talagalay waxa noqon kara jiilka soo socda ee Magic Mouse.
Maanta Apple ayaa ku dhawaaqday "Abaalmarinta Abaalmarinta Apple Music" ee ugu horreysay
Apple waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday "Abaalmarinta Abaalmarinta Apple". Dhacdadani waxay maanta ka dhici doontaa Apple Park, gudaha tiyaatarka Steve Jobs
Toddobaadkan waxaan u hormarineynaa barnaamijka 'Podcast' si aan uga hadalno dhacdadii Apple ee ka dhacday New York laakiin runtii wax yar ama waxba lagama oga illaa dhammaadkiisa
DisplayLink 5.2.1 waxay hagaajisaa arrimaha macOS Catalina.
Barnaamijka DisplayLink ee kuu ogolaanaya inaad ku xirto aalad kasta oo USB ah, dhibaatooyin laga soo saaray macOS Catalina laakiin waxaan ku tusaynaa sida loo xaliyo.
Kuwani waa barnaamijyada iyo cayaaraha ugu wanaagsan ee 2019 sida uu sheegayo Apple
Dhacdada Apple ee la xiriirta codsiyada iyo cayaaraha ugu wanaagsan sanadkaan 2019 waxay ku dhammaatay dhowr magacaabid
AirPods waxay keeneysaa dakhli badan oo ka baxsan Apple laftiisa
Falanqeeyayaasha kala duwan waxay diiradda saareen ganacsiga AirPods waxay bixiyaan xoogaa xog ah oo ku saabsan koritaanka shirkadaha dhinac saddexaad ee la xiriira Apple
Waxsoosaarka Apple (RED) wuxuu uruuriyay $ 220 milyan
Shirkadda Tim Cook waxay had iyo jeer muujisay xiiso gaar ah dhammaan sababahaas oo ku lug leh dhaleeceynta bulshada, ...
Dukaanka 14-aad ee Apple Store ee dalka Japan ayaa furmi doona XNUMX-ka bisha Diseembar
Markay tahay Diseembar 14, ragga ka socda Cupertino waxay furi doonaan albaabada meherka tobnaad ee Apple Store ee dhulka qorraxdu ka soo baxdo.
U beddelo .HEIC sawirrada .JPG si toos ah Mac-gaaga
Sawirro qaab .HEIC ah ayaa mararka qaarkood dhibaatooyin naga siiya qalabka saddexaad. Mac-gayagu wuxuu awood u leeyahay inuu sawirradan keligiis u beddelo.
Jimcaha Madow, kumbuyuutarka aamusnaanta ee Pro 16 iyo wax badan oo dheeri ah. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Asbuuc kasta waxaan kuu soo qaadaneynaa soo koobida qaar ka mid ah wararka ugu fiican ee usbuuca ee Soy de Mac. Ku raaxeyso iyaga iyo Black Friday ayaa soo bandhigeysa
Abuur mug APFS la isticmaali karo oo ku saabsan Mac-gaaga
Waad abuuri kartaa inta badan APFS-yada sida qaybta diskkaaga ugu muhiimsan, laakiin maskaxda ku hay inay fikrad fiican tahay in la xaddido cabirkooda. Waxaan ku tusaynaa sida.
Soosaaraha feejignaanta: Mac App Store wuxuu xirnaan doonaa maalmo kooban ciida gaalada
Kuwa mas'uulka ka ah dib-u-eegista mid kasta oo ka mid ah codsiyada ay doonayaan inay wax ka beddelaan ama ku daraan Mac App Store waxay qaataan fasaxyo laga bilaabo Diseembar 23 illaa 27.
Moodooyinka Mac ee galaya 200 ee kor u qaadista kaararka hadiyadda Jimcaha Madow
Maalmo ka hor, raggii ka socday Cupertino ayaa ku soo qoray boggooda internetka wixii aan ka filan karnay ...
Apple waxay bilaabaysaa diyaar garowga si ay Apple Tag uga dhabeyso
Apple waxay iibsaneysaa xayeysiis ku saabsan Google oo la xiriira Tile, si loo go'aamiyo goorta ay noqoneyso waqtiga ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo Apple Tag
Astaamaha dukaanka Apple ayaa bilaabay inay isu beddelaan casaan
Apple waxay horey u bilawday ololaha RED si loo siiyo aragti iyo taageero la dagaalanka AIDS-ka. Astaamaha dukaanku waa casaan
Qiima dhimista Australia waxay horseed u tahay BF ee Apple
Apple wuxuu bilaabayaa qiimo dhimista gaar ahaan Jimcaha Madow ee websaydhka Australia. In ka badan ama ka yar ayaan fikrad ka heli karnaa waxa halkaan imaan doona
Podcast 11 × 14: Toddobaadka Jimcaha Madow
Hal usbuuc ka badan, kooxda Soy de Mac iyo kooxda Actualidad iPhone ayaa kulmay si ay u duubaan dhacdo cusub ...
Websaydhka fulinta ee Apple ayaa meesha ka saaray astaanta Jony Ive ka dib markii uu ku dhawaaqay bixitaankiisa bishii Juun ee la soo dhaafay
Shirkadda xaraashka ee RR Action waxay diyaar u tahay qof kasta oo xiiseynaya, oo ah 3,5-inch floppy disk oo uu saxiixay Steve Jobs
Apple Arcade wuxuu sii wadaa inuu ku daro cayaaraha kaydkiisa
Apple waxay sii wadaa inay ku dhiirrigeliso Apple Arcade fiidiyowyo iyo xayeysiis. Xaaladdan oo kale waxay muujinayaan 11 ciyaarood oo laga heli karo Apple Arcade
Boot disk wuxuu kujiraa Xulashada Nidaamka ee macOS Catalina
Miyaad heli kari weyday ikhtiyaarka aad ku dooran karto qashinka bootka? MacOS-ka cusub ee 'Catalina' doorashadan waxay ku taal meel ka duwan
'Layaabka' waa ku dhawaaqida fasaxyada Apple ee sanadkaan
Xayaysiiska cusub ee Apple ee loogu dabaaldegayo ciidaha ayaa loogu magac daray "Layaabka" wuxuu maareeyaa inuu kiciyo dhammaan kuwa arka
Ma ka daashay inaad aragto xusuusinta cusboonaysiinta macOS Catalina?
Haddii aadan wali rabin inaad cusboonaysiiso macOS Catalina oo aad ka daashay helitaanka xusuusinta cusboonaysiinta, waa inaad ogaataa in si fudud looga saari karo
Shyamalan's Apple TV + taxanaha adeegaha wuxuu helayaa xilli ciyaareedkiisii ​​labaad
In kasta oo aan la sii deyn, haddana taxanaha sirta ah ee 'Servant' ayaa hadda la cusboonaysiiyay xilli ciyaareedkiisii ​​labaad.
Apple ayaa joojisay horudhaca Bangiga taariikhda xadgudubka galmada
Hordhaca filimka Apple ee Banker-ka ayaa la joojiyay waqti aan la cayimin, ka dib markii lagu eedeeyay xadgudubyo galmo oo ay geysteen gabdha halyeyga ah.
Apple Pay waxay ku biiraysaa RED toddobaad
Iibsasho kasta oo lagu sameeyo Apple Pay, Apple waxay ugu deeqi doontaa $ 1 TO RED Solo laga bilaabo Nofeembar 25 illaa Janaayo 2 Dukaammada Apple iyo khadka tooska ah
macOS la jaan qaadi doonin codsiyada CUDA
Nvidia waxay ku sheegtay bayaan ay soo saartay inay joojinayso taageerida macOS ee ku saabsan CUDA ee hormarinta.
Dane Dehaan ayaa ku biiray filimka "The Lisey Story," oo ay weheliyaan Julianne Moore iyo Clive Owen
Ku darista ugu dambeysa ee jilayaasha taxanaha Sheekada Lisey waa Dane Dehaa, oo jili doonta taageere dhibaateeya jilaaga caanka ah, Julianne Moore.
Apple waxay daabacdaa jilitaankii ugu horreeyay ee rasmi ah ee taxanaha "Run ha la sheego"
Maaddaama toddobaadyadu socdaan tan iyo markii la bilaabay adeegga fidinta fiidiyaha ee Apple, buugga la heli karo waa ...
Apple waxay isu diyaarineysaa «Black Friday»
At Apple waxay horeyba u haysteen wax kasta oo loo diyaariyo dhiirrigelinta Jimcaha Madow. Dukaanka shirkadda waxay ku soo bandhigi doonaan kaararka hadiyadaha ee gaaraya 200 euro
Soo hel sawir-gacmeedka 16-ka cusub ee "MacBook Pro
Waraaqaha cusub ee sida gaarka ah loogu xushay 16-inch MacBook Pro ayaa hadda diyaar u ah soo dejin.
Soo gal noocyadii hore ee macOS. Marna ma ogaan doontid haddii aad iyaga u baahan tahay iyo in kale
Haddii aad u baahan tahay inaad ku rakibto nooc ka hor macOS Catalina Mac-kaaga ama aad cusboonaysiiso bakhaarkaaga nidaamyada hawlgalka, waxaan ku tusi doonaa meesha aad ka heli karto.
Fiidiyowyada ugu horreeya ee sida Cult of Mac daabacaadda 2aad u noqon doonto
Fiidiyowyadii ugu horreeyay ee waxa daabacaadda labaad ee buuggu u noqon doono iyo taageerayaasha Apple ayaa billaabaya inay soo muuqdaan. Cult of Mac
Dhacdooyinka barnaamijyada ee New York, dareeraha xaglaha ee 'MacBook Pro' iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadkan waxaan haynaa dhowr war oo muhiim ah sida dhacdadii ka dhacday New York ama dareemayaasha cusub ee shaashadda MacBook Pro 16 "
Faallooyinka isticmaalaha iyo qiimeynta alaabtu mar dambe kama soo muuqan doonaan websaydhka Apple
Apple ayaa meesha ka saareysa qiimeynta iyo dib u eegista ay ku sameyso badeecadeeda dadka isticmaala bogga rasmiga ah
Diyaarada AirPods waxay labalaabaysaa 60 milyan sanadka 2019
Cusboonaysiinta AirPods waxay u dhaxeysaa 2019, waxay u saamaxday shirkadda ku saleysan Cupertino inay labalaabto tirada rarka marka la barbar dhigo 2018.
Ikhtiyaarrada qarsoon ee ka yimid bar-ka menu-gaaga oo leh furaha xulashada
Ma ogtahay in furaha ikhtiyaarka ee kujira Mac-kaaga uu kuu muujin karo shaqooyin dheeri ah adiga oo kujira bar menu-ka iyo codsiyada-saddexaad.
Ololaha Kirismaska ​​ee Apple ayaa socda iyada oo la soo celinayo illaa 20 Janaayo
Apple waxay bilaabeysaa ololeheeda Kirismaska ​​sanadkan iyadoo soo celinta alaabada la kordhiyay ilaa sanadka dambe
Fiidiyowga cajiibka ah ee gudaha Apple Park
Apple waxay kumanaan booqdayaal ah ku qaabilaysaa xarumaha Apple Park kiiskan waxaan haynaa fiidiyow waxa ay booqdayaashani arkaan
Apple wuxuu joojiyay hordhaca filimka Bangiga
Dhibaatooyinka daqiiqadii ugu dambeysay awgeed, Apple waxay go'aansatay inay joojiso filimka ugu horreeya filimka The Banker oo loo qorsheeyay maanta Los Angeles
Cult of Mac daabacaadda labaad ayaa la heli doonaa bisha Diseembar
Daabacaadda labaad ee Cult of Mac waxaa la heli doonaa laga bilaabo Diseembar 17. Buugga aruurinaya wixii dhacay 2006 ilaa hadda Apple
Austin waxay yeelan doontaa Apple Campus cusub oo la xaqiijiyay
Apple waxay si rasmi ah u xaqiijineysaa booqashada Donald Trump ee warshaddiisa Mac Pro ee Texas in ay bilaabayaan dhismaha xarun cusub.
Heerka dib-u-cusbooneysiinta ee 16-ka ah '' MacBook Pro 'ayaa lagu waafajin karaa sida aad jeceshahay.
16-inji cusub oo ah 'MacBook Pro' wuxuu keenayaa mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee loogu talagalay tafatirayaasha fiidiyowga. Waxaad dooran kartaa heerka cusbooneysiinta shaashaddaada
Apple Pay waxay kordhisaa tirada wadamada laga heli karo
Marka lagu daro Belarus, Apple Pay waxaa hadda laga heli karaa 58 dal.
E-mayllo fara badan oo kaaga yimaada Apple si aad uga mid noqotid Apple TV +
At Apple waxay u dirayaan emayllo fara badan isticmaaleyaasha soo iibsaday badeecad cusub si aan ugu biirno adeegga Apple TV +
Waxaan ku baraynaa inaad bedesho qaabka RAW ee dhowr sawir isla waqtigaas oo ku saabsan Mac-gaaga adiga oo aan lahayn codsiyo dhinac saddexaad ah. Tan ayaa ku mahadsan Automator
Dhacdo Apple ah oo ka dhacday New York ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay Disember 2
Shirkadda Cupertino ayaa hadda si rasmi ah u shaacisay dhacdo ka dhici doonta magaalada New York bisha Diseembar 2.
Hadda waxaa laga heli karaa Naadiga Buugga Oprah ee Hadda laga heli karo Apple TV +
Bandhiggii ugu horreeyay ee Oprah ee loo sameeyay adeegga fiidiyowga ee Apple ayaa hadda laga heli karaa Apple TV +.
Kaftan qosol leh oo warqadaha istiikarka ah ee AirPods dabaqa ah
Tani waa kaftan qosol badan oo Pablo Rochat uu ku dhejinayo istiikarada taxane ah dabaqa oo leh naqshad la mid ah ta AirPod
AirPods Pro wuxuu ka tayo wanaagsan yahay codadkii kuwii ka horreeyay.
In kasta oo AirPods Pro ay hagaajiyeen tayada codka, haddana iyagu ma ahan kuwa ugu fiican qaybtooda haddana wali isticmaalayaashu way ka doorbidaan moodooyinka kale
16 ″ MacBook Pro, Shil Mail iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hal maalin oo Axad ah waxaan dhamaantiin idinla wadaageynaa warka wanaagsan ee usbuuca ee ku saabsan degelkeena waxaan ka imid Mac.
Apple News + halganka, kuma guuleysan, inuu soo jiito macaamiil cusub
Adeegga rukunka joornaalka Apple, Apple News +, ayaa ku guuldareystay inuu ka codsado dadweynaha guud wuxuuna hayaa tiro la mid ah macaamiishii markii la bilaabay.
Ku noqo furaha adag ee 'esc key' ee 'MacBook Pro' oo wata 'TouchBar'
Ku dhowaad 4 sano ka hor Apple ayaa sii daayay TouchBar waxayna ka saartay furaha adag esc. Hada markale ayaad kuheli laheyd khiyaanadan fudud.
Muuqaal cusub oo loogu talagalay taxanaha Adeegga, ayaa laga heli karaa Noofambar 28 Apple TV +
Haatan waxaan gacanta ku haynaa trailer cusub oo loogu talagalay taxanaha 'Servant', oo ah sharad weyn oo soo socota ee Apple ee adeeggeeda fiidiyoowga ah
Hal usbuuc ka badan, kooxda Soy de Mac iyo kooxda Actualidad iPhone ayaa kulmay si ay u duubaan dhacdo cusub oo ku saabsan podcast-keena.
Tim Cook wuxuu "Trump" ku tagi doonaa "booqasho" xarunta Texas
Booqashada Austin, Warshadaha Texas waxaa loo qorsheeyay in ay wada galaan madaxa Apple Tim Cook iyo Madaxweynaha Mareykanka
Dhamaadka kumbuyuutarka balanbaalis ee ku yaal MacBooks halkan ayuu joogaa
Apple ayaa ugu dambayntii ku dhajinaysa tirtirida kumbuyuutarka iyada oo la adeegsanayo qaab balanbaalis ah oo ku jira MacBooks-ka iyada oo caddaynta tani ay tahay imaatinka 16 "MacBook Pro
Agaasimihii hore ee HBO ayaa qarka u saaran inuu heshiis la galo Apple TV +
Apple waxay ku dhowdahay inay heshiis la gasho madaxii hore ee HBO, iyada oo loo marayo shirkadda wax soo saarkeeda ee RLP & Co.
Kulamada saxaafadda ee Apple waxay fure u noqon karaan 16 ″ MacBook Pro
Waxay umuuqataa in Apple ay qabato kulanno taxane ah oo warbaahin gaar loo leeyahay ah oo laga yaabo inay muujineyso 16-ka cusub ee "MacBook Pro.
Fikradda ah sida macOS 11 Ventura ay noqonayso
Fiidiyow YouTube-ka ah ayaa noo ogolaanaya inaan aragno fikrad cusub oo ah waxa macOS Ventura cusubi noqon karo. Waqtigan xaadirka ah xiisaha laakiin fikradaha wanaagsan.
Ku beddel qaababka fiidiyowga oo leh Beddele kasta oo Mp4 ah
MP4 Converter waa mid ka mid ah codsiyada ugu dhameystiran si ay u awoodaan inay u badalaan inta udhaxeysa qaabab video kala duwan gabi ahaanba lacag la'aan.
Apple waxay ku adkeysaneysaa inay ka go'an tahay asturnaanta adeegsadaha
Apple wali waxaa ka go'an inay siiso asturnaanta dhammaan isticmaaleyaasha waxayna muujineysaa qayb cusub oo shabakad ah oo loogu talagalay.
Sida loo rakibo macOS Catalina on Macs aan ku taageerin DosDude
Haddii aad rabto inaad ku rakibto macOS-ka cusub ee 'Catalina' Macs-yadaas, taas oo sida ay shirkaddu ku habboon tahay aan ahayn, waa inaad isku daydaa DosDude.
Xanta AirTag, muraayadaha Apple AR iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hal usbuuc ka badan waxaan soo qaadaneynaa isku soo aruurin kooban oo aan ku soo qaadaneyno qaar ka mid ah wararka ugu wanaagsan usbuuca ee ka imid Mac
Iibinta Apple Watch ayaa kordhay 51% intii lagu jiray rubucii lasoo dhaafay
Hal rubuc dheeraad ah, Apple Watch ayaa wali ah midka ugu iibinta badan ee smartwatch in ka badan kan labaad.
Apple TV + wuxuu daaha ka rogay muuqaal daaha gadaashiisa filimkiisa taxanaha ah "See"
Apple TV + wuxuu daaha ka rogay muuqaal daaha gadaashiisa loogu talagalay taxanahiisa "See". Tixdu waxay ka warramaysaa nolosha dhulka ka jirta fayras ka dib.
Hadda waxaad ku ordi kartaa macOS Catalina hoosta deegaanka Linux
Tababarkan iyo mahadnaqa mashruuca GitHub, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato macOS Catalina Linux adigoon haysan aaladda Mac.
Sida loo beddelo daaqadda la soo bandhigay markii la furayay Finder
Waxaan ku tusineynaa sida aad u badali karto daaqada ka bilaabaneysa marka aad furto Finder-ka Mac-gaaga.Waxaad ku dari kartaa gal kasta, disk, iwm.
Filimkii ugu horreeyay ee taxanaha Adeegga ee Apple TV + hadda waa la heli karaa
Filimkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee taxanaha Adeegga ah ayaa hadda la heli karaa, taxane ah oo ku dhufan doona adeegga fiidiyowga ee qulqulaya bisha Noofambar 28.
Sicir-dhimista illaa 30% ee cusboonaysiinta Sonos-kaaga
Sonos wuxuu ku darayaa barnaamijka dib u warshadaynta qalabka halkaas oo dadka isticmaala ay ka heli karaan ilaa 30% qiimaha afhayeenka cusub.
Sida loo dhaafo erayga sirta ah ee barnaamijyada bilaashka ah ee macOS Catalina
Casharradan fudud waxaad ku baran doontaa sida loo joojiyo lambarka sirta ah ee Mac App Store ee codsiyada bilaashka ah ee deegaanka macOS Catalina.
Ka guur sawirada Aperture ilaa macOS Catalina si sahlan nooca 10.15.1
Ka guurista sawirada laga bilaabo Aperture ilaa macOS Catalina way fududaan doontaa nooca 10.15.1. Apple waxay abuurtay cashar haddii aad sameysay hijrada
Shirka kama dambaysta ah ee loo yaqaan 'Pro Cut Pro Summit' ayaa dhacaya berri waxaana ku jiri doona wax la yaab leh kooxda wax soo saarka Apple
Intii lagu guda jiray shirkii ugu dambeeyay ee Pro X berri, Apple wuxuu tusi karaa waxqabadka Mac Pro oo leh tifaftiraha fiidiyowga ee Apple.
Daahfurka Apple TV + kama dhalin xiise badan daawadayaasha
Bishii Nofeembar 1, Apple wuxuu si rasmi ah u furay albaabada Apple TV +, ballanqaadkiisa cusub ee adduunka ee ...
Aaladda laser-ka ayaa khafiifin kara Siri iyo kaaliyeyaasha kale ee codka sida Alexa ama Google Home
Tilmaamayaasha laser-ka ayaa umuuqda inay dhibaato ku yihiin aaladaha qaar oo leh kaaliyeyaasha codka sida Siri, Alexa, ama Google Home. Kuwaani waa la jabsaday
Samee Finder si otomaatig ah u fur marka aad USB galineyso Mac-gaaga
Haddii aad dooneysid Raadiyaha kujira Mac-gaaga, macOS Catalina, inuu si otomaatig ah ufuro markaad kumbuyuutarka ku xirmeyso, raac talaabooyinkaan soo jeedineyno
Tufaaxa Apple Oo Soo Saaray Filim Cusub Oo Filim Ah Hala
Ragga ka socda Cupertino ayaa hada soo saaray muuqaal cusub oo xayeysiin ah oo loogu talagay mid ka mid ah filimada ku dhufan doona Apple TV + maalmo gudahood: Hala
Sida loo isticmaalo "Tubada si aad u sheegto waqtiga" Apple Watch
Waxaan ku tusineynaa sida loo kiciyo digniinta saacadlaha ah ee Apple Watch. Sidan oo kale, saacaddu waxay kugu wargelinaysaa gariir saacad kasta
«AirTag» horey ayey uga timid Apple waxa aaladda Apple xaqiijiso
Shirkadda Cupertino mar hore ayey iibsan laheyd astaanta ganacsiga ee AirTag. Tani waxay xaqiijinaysaa inay ku dhow yihiin inay soo bandhigaan meelaha ay ku sugan yihiin
Ku hagaaji macOS Catalina waqtiga boot-ka ee leh terminal
Waxay hagaajineysaa waqtiga bilowga ah ee macOS Catalina, iyadoo lagu nadiifinayo keydadka iyo caawinta macOS Catalina Terminal daqiiqado yar gudahood.
Sida loo hagaajiyo Maktabadda Sawirka Sawirka haddii aad dhibaatooyin ku qabtid macOS Catalina
Sida loo hagaajiyo Maktabadda Sawirka Sawirka haddii aad dhibaatooyin ku qabtid macOS Catalina. Waxaan ku baraynaa inaad ka bilowdo meel bilow ah maktabadda sawirka.
Toddobaadka AirPods, xanta MacBook Pro, Catalina iyo waxyaabo kale oo badan. Ugu fiican usbuuca ee SoydeMac
Soo koobid Todobaadle ah oo ay kujiraan wararka ugu muhiimsan waxaan ka imid Mac. Todobaad buuxa marka la eego wararka softiweerka iyo qalabka qalabka.
Maanta Apple at CaixaForum ee Madrid
Maanta Apple ayaa timid Madrid. CaixaForum iyo laga bilaabo Nofeembar 15, bandhigyo dhowr ah oo ay ka buuxaan hal-abuur ayaa lagu qaban doonaa.
Apple waxay bilaabeysaa inay bixiso sanadle ah Apple TV + oo ah 49,99 euro
Manzana. Kaliya maahan inay noo ogolaato inaan qandaraas siino Apple TV + bilba bil, laakiin sidoo kale waxay na siisaa ikhtiyaarka sanadle ah ee qandaraaska oo aan la dhignay 10 euro
Tim Cook Wuxuu Yiraahdaa AirPods Pro Maaha Bedelka AirPods
Apple oo uu weheliyo Tim Cook hogaamiyaha ayaa soo saareysa shaqadii lagu qabtay AirPods Pro waxayna sharraxeysaa inay yihiin hal dookh oo dheeri ah oo loogu talagalay dadka isticmaala.
Apple Pay waxay sameysay 4 jeer macaamil ka badan tan PayPal ee rubucii la soo dhaafay
Tikniyoolajiyadda lacag-bixinta wireless-ka ah ee Apple, Apple Pay, ayaa ka sarreysay macaamilada PayPal rubucii u dambeeyay.
Waxaan la wadaagnaa dhacdada cusub ee Apple Podcast-ka ee aan sameyno toddobaad kasta oo aan uga hadalno wararka Apple iyo wararka
Barnaamijka Apple TV waxaa hadda loo heli karaa 2019 Sony TV-yada
Moodooyinka Sony TV ee ay bilaabeen sanadka 2019 oo dhan ayaa hadda soo dejisan kara qalabka ay ku jiraan barnaamijka Apple TV
Haddii AirPods Pro ay qaali tahay, sug inaad aragto qiimaha dayactirkaaga
AirPods Pro wuxuu ku iibin doonaa qiimo sare, iyo sidoo kale qiimaha dayactirka ama bedelida mid kasta oo ka mid ah sameecadaha dhagaha
Apple TV + inay bixiso saddexda qaybood ee ugu horreeya taxanaha Bandhigga Subaxnimo ee Noofambar 1
Laga bilaabo Nofeembar 1, Morningh Show waxaa lala heli doonaa saddexda qaybood ee ugu horreeya xilli ciyaareedka koowaad.
Ma u xiisay iTunes ama Aperture-ka macOS Catalina? Dib-u-celinta ayaa dib u soo celisa iyaga
Haddii aad rakibtay macOS Catalina oo aad seegto iTunes-ka caadiga ah, Qabashada ama iPhoto, waa inaad si bilaash ah iskudaydaa arjiga Retroactive.
Apple waxay abuuri kartaa qalab badan oo u gaar ah guriga
Apple waxay dooneysaa inay horumariso marin u helka HomeKit ee soosaarayaasha, laakiin sidoo kale waxay dooneysaa inay abuurto wax soo saarkooda aqliga u gaarka ah.
Qeybta ugu horreysa ee "See" waxay soo bandhigaysaa xanta ku saabsan Apple TV + waxyaabaha ku jira dhammaan dhagaystayaasha
Haddii ay dhacdo in qof kasta uu shaki ka qabo nooca content ee lagu arki doono taxanaha Apple, dhacdadii ugu horreysay ee See waxay beenineysaa dhammaan wararkaas.
Haddii aad haysato 1,5 milyan oo yuuro waxaad heli kartaa tan Apple-1
Haddii lacag badan kuu hartay, waxaa laga yaabaa inaad ka heli kartid mint-ka Apple-1 u dhow iyo qalabkiisa lagu xaraashayo eBay.
MacOS Catalina Beta 3, astaamaha Oktoobar, AirPods Pro kiiska iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan horeyba u haysanay wararkii ugu fiicnaa ee usbuuca ee Soy de Mac. Toddobaad aan sugeynay ogeysiis muhiim ah oo aakhirkii aan imaan
Apple waxaa lagu abaalmariyaa Shiinaha sida ay ugu heellan tahay deegaanka.
Apple waxaa ku abaalmariyey Xarunta Dadweynaha ee Cilmi-baarista Deegaanka ee Shiinaha dadaalkeeda deegaanka ee Aasiya
Nofeembar 7, Dukaanka Apple ee Puerta del Sol wuxuu dib u furayaa 100%
Shirkadda Cupertino waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeysaa furitaanka wadarta dukaanka Apple ee Madrid, midka ku yaal Puerta del Sol
Apple waxay rabtay inay ku socoto wadada degdega ah ee abuureysa Apple TV +
Waxaan ka hadlaynay dhowr toddobaad wax ku saabsan Apple TV +, adeegga fiidiyowga qulqulka ah ee la heli doono xiga ...
Apple TV + waxay soo saari doontaa in ka badan 9.000 milyan oo doolar sanadka 2025
Sida laga soo xigtay Morgan Stanlye, adeegga fiidiyowga ee Apple wuxuu soo saari doonaa in ka badan 9.000 milyan oo doolar sanadka 2025.
Xaqiiqdii ma hayno wax muhiim ah bishan
Waxay u muuqataa wax badan oo muuqata in bishaan aan laheyn furaha rasmiga ah ee Apple si loo soo bandhigo wax soo saarkiisa iyo in Oktoobar ay kudhamaato wax kayar todobaad
Lacag bixinta mobilada ee Starbucks waxaa la wareega Apple Pay
Maraykanka gudihiisa, isticmaalayaashu waxay bilaabaan inay isticmaalaan inbadan oo Apple Pay ah waana tan la ogaan karo waqtiga habka lacag bixinta uu ka batay silsiladaha sida Starbucks
Hal usbuuc ka badan, kooxda Soy de Mac iyo Actualidad iPhone waxay kulmeen si ay u duubaan dhacdo cusub oo Apple ah iyo dhammaan wararkii usbuucii la soo dhaafay.
Dadka oo dhan waxay lahaan karaan ilaa 7 xilli
Sida laga soo xigtay WIRED, abuuraha silsiladdu wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo uu ku duubi karo 7 xilli oo loogu talagalay Dadka oo dhan
Apple waxay dooneysaa inay isugu soo uruuriso dhamaan shaqaalaheeda London meel keliya.
Apple waxay bilowday habraacyada lagama maarmaanka u ah inay qayb weyn oo ka mid ah shaqaalaheeda ku urursato London isla goobtaas
Yelp waxay cusbooneysiisaa barnaamijkeeda Apple Watch si ay uga dhigto mid la jaan qaadi kara
Mid ka mid ah codsiyada ugu horreeya ee adeegsiga kombiyuutarka laga heli karo Apple Watch Series 6 waa Yelp waxayna noo oggolaaneysaa inaan ku helno meel aan u socono si ka dhakhso badan.
Taariikhaha xasaasiga ahi waxay gudbeen bishii Oktoobar
Miyaan ka dhammaan karnaa dhacdada Apple bishaan Oktoobar? Adoo eegaya taariikh ahaan dhacdooyinka sanadihii hore waxaan heli karnaa fikrado
Warbixinta kahortaga kalsoonida, oo ay kujirto Apple, ayaa diyaar ah bilowga sanadka
Guddiga Mareykanka ee mas'uulka ka ah caddeynta in Apple ay ku xad gudubtay sharciyada kahortaga kalsoonida, waxay soo gudbin doontaa warbixin horraanta 2020.
Apple waxay codsaneysaa in IXI Mobile ay kaa joojiso dacwadaada.
IXI Mobile ma lahan waxyaabo fudud oo la xiriira dacwadii ay ka gudbisay Apple sanadkii 2014 oo ku saabsan arin patent ah.
Qaar ka mid ah senetarrada Mareykanka ayaa Apple ugu midabeeya xiriirka ay la leeyihiin Shiinaha
Qaar ka mid ah senetarada Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay go'aanka Apple ay ku saartay Codsi ka yimid dowladda Shiinaha.
Cusbooneysiinta macOS, Apple TV +, iyo inbadan. Ugu fiican usbuuca ee SoydeMac
Isbuucaan dhammeystir toddobaadkan bisha Oktoobar oo leh warar muhiim ah, cusbooneysiin iyo warar kale oo aad uwanaagsan
Apple weli waa nooca ugu qiimaha badan
Sannadkii toddobaad oo isku xiga, Apple waa lambarka 1 ee TOP 10 ee noocyada ugu qiimaha badan. Waxaa jira toddobo isku xigta.
Waxay ahayd sanad. Goorma iyo sidee Photoshop-ka iPad-ku u imaan doonaa?
Haddii aad sugeysay Photoshop-ka iPad-ka, way ka dhowaan kartaa sidii hore laakiin xaqiiqdii kuma qancin doonto.
Netflix waxay soo dhaweyneysaa Apple TV + iyo Disney +
Netflix waxay sheegaysaa inaysan ka walaacsanayn imaatinka Disney + iyo Apple +, runtiina way soo dhawaynaysaa iyaga oo sheegaysa inay u oggolaan doonaan inay sii koraan.
Waxaan horeyba u haysannay qayb cusub oo toddobaadle ah oo ka mid ah barnaamijyadayada 'Podcast' oo aan kaga hadlayno Shiinaha iyo Apple, cusbooneysiinta, xanta iyo wararka kale
Sida loo hagaajiyo shilalka astaanta mamnuuca ah markaad bilaabeysid Mac-gaaga
Waxaan ku tusineynaa xulashooyinka aan heli karno xilligan oo ah markii aan bilawno Mackeenii calaamadda xaaraanta ah ay soo muuqato
Miyaad qiyaasi kartaa inay bilaabeen Giraantii Apple?
Miyaad iibsan lahayd qalab ay soo saartay oo ay iibisay Apple, kaas oo lagu xidhay farta oo aan ku baabtiisi karno sida Giraanta Apple? Waxay u maleynayaan sidaas.
Goldman Sachs: "Kaarka Apple-ka ayaa guul gaadhay"
Goldman Sachs wuxuu caddeeyay in kaarka Apple-ka uu ahaa kaarkii ugu guusha badnaa ee uu yeesho tan iyo markii la bilaabay, isagoo soo saaray faa iidooyin aad u badan.
Tixda taxanaha ah ee Subaxdii Subaxnimo waxay leedahay miisaaniyad dhan 300 milyan oo doolar
Miisaaniyadda Apple ee labada xilli ee ugu horreeya taxanaha Bandhigga Subaxnimo waxay gaadhay $ 300 milyan.
Ikea KADRILJ iyo FYRTUR smart blinds si faahfaahsan
Ikea horeyba waxay uheysay indhoolayaasha cusub ee mootada ee laga heli karo dukaamada iyo shabakada internetka. Kuwani waa indhoole indhoole caqli leh
Qalabka Roku wuxuu hadda heystaa barnaamijka Apple TV +
Adeegga fiidiyoowga ee Apple ayaa sidoo kale laga heli karaa iyada oo loo marayo aaladaha Roku iyada oo ay ugu mahadcelinayaan arjiga cusub ee hadda lagu heli karo bilaash.
Dune Pro, kiiska PC ee macno ahaan nuqul ka dhigaya Mac Pro
Marka aadan iibsan karin Mac Pro oo aad rabto inaad yeelato nashqad aad ku dhisto PC kuu gaar ah ama xitaa "Hackintosh". Sanduuqa 'Dune Pro' waa ikhtiyaar
Google Pixelbook Go wuxuu doonayaa inuu istaago Apple's MacBook
Waxyaalo faro ku tiris ah oo wanaagsan ayaa shalay gelinkii dambe lagu soo bandhigay Google, oo ay ku jiraan laptop-ka cusub ee Google Pixelbook Go
Kaadhka Apple-ka kama dhaafo khayaanada
Kaadhka Apple wuxuu umuuqday mid aan lasoo koobi karin ilaa dhowr maalmood kahor markii dhowr kiis oo musuqmaasuq kaararka ah ay soo if baxeen.
Dukaanka Apple ee Amsterdam wuxuu furayaa 24-ka Oktoobar
Dukaanka Apple ee Amsterdam wuxuu mar kale furi doonaa Oktoobar 24
Apple wuxuu la galaa is-soo-saar Spielberg, Tom Hanks iyo qaybta Band ee Walaalaha
Taxanaha Band ee Walaalaha iyo Baasifigga wuxuu horey u leeyahay magac: Masters of the Air, oo ah taxane yar oo noqon doona kii ugu horreeyay ee ay Apple soo saarto.
Sida looga reebo feylasha nuqulka Mashiinka Waqtiga
Ma haysatid meel kugu filan oo ku saabsan diskigaaga nuqulada Mashiinka Waqtiga? Waxaan ku tusaynaa waxa ay tahay inaad sameyso si aad u hesho adigoon isticmaalin disk kale
Apple waxay gaadhay China iyada oo loo marayo Apple TV +
Apple waxay dooneysaa inay sii wado ka farxinta dowladda Shiinaha. Kama labalabeeyo inuu siiyo tilmaamo ku saabsan Apple TV + soosaarid inay u roonaan doonaan dalkaas.
macOS Catalina ayaa gebi ahaanba ka fiican isbuuca. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hal usbuuc ka badan waxaan ku soo qaadaneynaa waxyaabaha muhiimka ah ee usbuuca waxaan ka imid Mac waana tan noo ogolaaneysa inaan ku darno dhamaan wararka la xiriira macOS Catalina
Clive Owen ayaa ku biiray aktarada "The Lisey Story" oo ay weheliso Julianne Moore
Clive Owen wuxuu qeyb ka noqon doonaa jilayaasha sheekada Lisey, oo ku saleysan sheekada uu qoray Stephen King ee Julianne More waxaana soo saaray JJ Abrams.
Alfonso Cuarón wuxuu saxiixay heshiis lagu abuurayo nuxurka asalka ah ee Apple TV +
Agaasimaha Mexico ee Roma iyo Gravity, Alfonso Cuarón ayaa heshiis la gaadhay shirkadda Apple si ay u soo saaraan taxane asal ah.
Saamiga suuqa adduunka ee Macs aad ayuu u yara dhacaa.
In kasta oo maraakiibta Mac iyo MacBook ay korodheen rubucii u dambeeyay, haddana saamiga suuqa adduunka ee Apple waxyar ayuu hoos u dhacay. Wali ma walwalin.
Apple wuxuu sii daayaa betas cusub oo loogu talagalay iPadOS 13.2, tvOS 13.2 iyo watchOS 6.1
Beta-kii labaad ee iPadOS iyo tvOS 13.2 iyo nooca saddexaad ee watchOS 6.1 ayaa hada la heli karaa si loo soo dejiyo, inkasta oo xilligan kaliya loogu talagalay kuwa horumariya
OECD waxay dib u eegi doontaa sharciyada canshuuraha Yurub ee khuseeya shirkadaha sida Apple
Midowga Yurub, iyada oo loo marayo hay'adeeda OECD, waxay dooneysaa inay wax ka bedesho sharciyada bixinta canshuuraha shirkadaha sida Apple.
Ryan Reynolds iyo Will Ferrel waxay ku biirayaan Apple TV + bet
Ryan Reynolds iyo Will Ferrell inay jilaan filimka Apple TV + biilka kirismaska
Waxaad horey u haysatay dhacdo cusub oo Apple Podcast ah oo la heli karo. Qeybtan waxaan uga hadlaynaa wararka ka imanaya gacanta macOS Catalina.
Baro sida loogu mideeyo iPhone-kaaga ama iPad-kaaga macOS Catalina bilaa iTunes
Haddii aad rakibtay macOS Catalina oo aad qabtid su'aasha ah sida loo is waafajiyo iPhone-kaaga ama iPad-kaaga Mac-ga oo aan lahayn iTunes, ha ka welwelin. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Sida loo rakibo macOS Catalina xoq
Waxaan ku tusineynaa sida aad ugu shaqeyn karto rakibid nadiif ah oo ah nidaamka cusub ee macOS Catalina ee ku shaqeeya Mac-gaaga
Apple wuxuu ku guuleystey dagaalka ka dhanka ah Jaamacadda Wisconsin
Apple wuxuu ku guuleystey dagaal maxkamadeed oo ka dhan ah Jaamacadda Wisconsin xadgudub sharciyeed. Guul ka dhan ah dalabyada badan ee isaga u furan.
Barnaamijka 'Twitch' ayaa hadda loo heli karaa Apple TV
Hal bil ka dib markii la bilaabay Twitch beta ee tvOS, nooca ugu dambeeya ee barnaamijka Apple TV ayaa hadda laga heli karaa tvOS Store
Apple wuxuu soo bandhigayaa 15-kii daqiiqo ee ugu horreeyay taxanaha Dhamaan Aadanaha ee New York Comic Con
Intii lagu gudajiray dabaaldega New York Comic Con, Apple waxay muujisay daqiiqadihii ugu horreeyay ee 15 ee qaybtii ugu horreysay ee loogu talagalay Dadka oo dhan
Apple wuxuu rukhsad u siiyaa kumbuyuutarka kumbuyuutarka casriga ah ee iPad-ka
Qiyaas inaad awood u leedahay inaad ku qorto kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee Ipadka oo aad leedahay dareen ah inaad ku sameyso kumbuyuutarka analogga. Apple ayaa shati galiyay suurtagalnimada.